रेसेपीः यसरी तयार गरौं स्वादिलो भेज बिरयानी | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
रेसेपीः यसरी तयार गरौं स्वादिलो भेज बिरयानी
बिरयानी एक स्वादिष्ट भारतिय परिकार हो । बिरयानी भेज तथा ननभेज दुबैखाले बनाउन सकिन्छ । हामीले घरमै पनि बिरयानी बनाएर खान सक्छौ । हुन त यसका लागि अलि धेरै मरमसला आवश्यक हुन्छ, तर बनाउने विधी भने त्यती जटिल छैन ।
यहाँ दुई जनालाई पुग्ने भेज बिरयानीको रेसेपी दिइएको छ ।
– ३ कप बासमती चामल (लामो दाना भएको)
– २ सुकुमेल
– २ ल्वांग
– दालचिनीको सानो टुक्रा
– १ सानो तेजपत्ता
– नुन स्वाद अनुसार
– काटेको एउटा सानो आलु
– एक चौथाई कप फूलगोभी
– एक चौथाई कप गाजर
– एक चौथाई कप सिमी
– एक चौथाई कप हरियो मटरको दाना
– १ वटा प्याज, लामो काटेको
– २ वटा हरियो खुर्सानी, बियाँ निकालेको
– १ चिया चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट
– चार, पाँच वटा मरिच
– आधा चिया चम्चा जिरा
– आधा चिया चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो
– आधा चम्चा बेसार
– एक चिया चम्चा जीरा र धनियाको धुलो
– आधा चम्चा गरम मसला
– आधा कप दही
– दुई चम्चा जति धनिया
– ३ चम्चा तेल
बिरयानीको दम पकाउनका लागि
– एक चौथाई कप तारेका प्याज
– १ ठूलो चम्चा घिउ
– १ ठूलो चम्चा तातो दुधमा भिजाएको केसर
– केही पत्ता पदिना
१. सबैभन्दा पहिला चामललाई पानीमा भिजाउनु पर्छ
२. त्यसपछि ग्रेभी तयार गर्ने
३. जब ग्रेभी आधा पाक्छ, तब चामल पकाउन सुरु गर्ने
४. चामल र ग्रेभीलाई एकसाथ कुनै भाँडामा पकाउने
– सबै सब्जीलाई समान आकारमा काट्ने । प्याज र खुर्सानीलाई लाम्चो अकारमा काट्ने ।
– एक प्यानमा मध्यम आँचमा तीन ठूलो चम्चा तेल तताउने । त्यसमा प्याज, खोर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, मरिच, सुकुमेल र थोरै जिरा हाल्ने । जबसम्म प्याज हल्का सुनौलो रंगको हुँदैन, त्यसबेलासम्म भुट्ने ।
– त्यसमा आलु, फूलगोभी, गाजर हाल्ने र तीन-चार मिनेट भुट्ने ।
– त्यसमाथि सिमी, हरियो मटर र नुन हाल्ने । यसलाई राम्ररी चलाएर छोपिदिने । सब्जीलाई धेरै गल्न नदिने । हल्का पकाउने, जसका लागि बढीमा ७ मिनेट लाग्न सक्छ ।
– त्यसरी पकाएको सब्जीमा रातो खुर्सानीको धुलो, बेसार, जिरा धनियाको धुलो, गरम मसला हाल्ने र चलाउने । अब १ मिनेट पाक्न दिने ।
– त्यसपछि दही र हरियो धनियाँ हाल्ने ।
– त्यसलाई राम्ररी घोल्ने र १ मिनेट पकाउने । त्यसपछि आगो बन्द गरिदिने । जबसम्म चामल पाक्दैन, तबसम्म छोपेर राख्ने ।
चामल पकाउने विधी
– १५ मिनेट जति पानीमा भिजाएको चामलाई गहिरो प्यानमा मध्यम आँचमा पकाउने । जब चामलको पानी उम्लन थाल्छ, त्यसमा दुई सुकुमेल, ल्वाङ, दालचिनी, तेजपत्ता र नुन हाल्ने । जब चामल ८५ प्रतिशतजति पाक्छ, तब त्यसलाई ७ मिनेटजति उमाल्ने ।
– चामललाई पुरै नपकाउने । चामललाई निकालेर त्यसको पानी छान्ने ।
– तयार गरेको आधा जति ग्रेभीलाई अलि ठूलो भाडामा फैलाएर राख्ने । त्यसमाथि चामललाई फैलाउने । उक्त चामलमाथि दुधमा भिजाएको केसर छर्कने ।
– समान रुपले काटेर तारेको प्याज, हरियो धनिया र केहि पदिना त्यसमाथि राख्ने ।
– त्यसमाथिबाट बाँकी रहेको ग्रेभी समान रुपले फैलाइदिने ।
– त्यसमाथि एक ठूलो चम्चा घिउ हाल्ने । र, फिटिङ ढक्कनले छोपिदिने । त्यसलाई मध्यम आँचमा एकछिन पकाउने ।-अनलाइनखबरबाट
4/02/2017 01:08:00 PM